जनसङ्घर्ष Archives - Left Review Online
‘बम्बै जाने रेलगाडीमा दिल्लीको माल आयो, गरिबका दिन आयो, ठालुको काल आयो ।’ 'कित जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’ - भीमदत्त पन्त । नेपाली स्पार्टाकस भीमदत्त पन्तलाई राजनीतिक व्यवसाय नबनाऊ ! आफ्ना हितअनुसार व्यक्तित्वको प्रयोग गर्नु अपराध हो भने हितअनुकूल इतिहास...बाँकी
#नरेन्द्रजंग पिटर#भीमदत्त पन्त#स्पार्टाकस
यसरी भएको थियो क. मित्रमणि आचार्यको हत्या
क. पदम भण्डारी २०७७ वैशाख १८ गते बिहीवार
घटना २०४२ साल बैशाखको हो । चितवनको मेघौली हाई स्कुलमा क्यारम बोर्ड खेलबाट विवाद सुरु भएर राजनीतिक रुप लिँदै थियो । विद्यार्थीहरु विभिन्न समूहमा आवद्ध भएकाले आफ्नो समूहलाई माथि उचाल्ने र अर्काको समूहलाई पछार्ने क्रमहरु देखिन थाले । विद्यालयको ब्ल्याक बोर्डमा जिन्दावाद, मुर्दावाद जस्ता नाराहरु पनि दखिन थाले...बाँकी